राजनीति Archives - Page 124 of 129 - Namaste Times
आइतबार, आश्विन ०७, २०७५ | Friday, June 9, 2017
म काठमाडौंको मात्रै होइन सिंगो देशको विकास गर्न सक्छु – रेखा थापा
तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने सहर कुन हो? धेरै मुलुक घुमिसके तर मलाई नेपालकै सहर मन पर्छन्। बनाउन सक्दा काठमाडौं असाध्यै राम्रो र सुन्दर हुन्छ। नेपालमा काठमाडौं, धरान र पोखरा मलाई एकदमै मनपर्ने सहर हुन्। यहाँ पाइने प्राकृतिक सौन्दर्य र वातावरणीय अनुकूलता विश्वका अरु कुनै पनि देशमा पाइँदैन। सबै नेपाली सरहका आफ्नै विशेषता छन्। अरु देशका सहर बनावटी सामग्रीले सजिएका छन् हाम्रा प्राकृतिक रूपले। नेपालका हर...
बेलायतको निर्वाचनमा नेपाली उम्मेदवारलाई सम्मानजनक भोट
लण्डन- बेलायतको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली मूलका एकमात्र उम्मेदवार डा. बच्चु कैलाश कैनी पराजित भएका छन्। लेबर पार्टीबाट डार्टफोर्ड क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका कैनीले १८ हजार २४ मत प्राप्त गरे। उनलाई कन्जरभेटिभ पार्टीका गारेथ जोन्सन्ले ३१ हजार २ सय १० मत ल्याएर पराजित गरेका हुन् । बेलायतको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली मूलको उम्मेदवार बन्ने कैनीले आफूले गत आमनिर्वाचन भन्दा ५ हजार बढी मत प्राप्त गरे...
दोस्रो चरणको चुनावअघि संविधान संशोधन हुँदैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अघि संविधान संशोधन सम्भव नभएको प्रस्ट पार्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपालाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक आज व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गर्दै देउवाले संविधान संशोधन विधेयक तत्काल पारित हुने अवस्था नभएकाले निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपालाई आग्रह गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु अघि गत मंग...
सरकारले एमालेलाई एक्ल्याउन खोज्यो : नेम्वाङ
अविन लिम्बू एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा सरकारले सधैं एक्ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ । व्यवस्थापिका संसदको आज बसेको बैठकमा बोल्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले राजनीतिक निकासको बहानामा सरकार एक्लै हिड्न खोजेको दावी गर्नुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयन, संविधान सर्वस्वीकार्यताको नाममा प्रतिपक्षीलाई ’कुना पार्ने’ काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेम्बाङले भन...
को बन्दैछ प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार ?
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नै लागेका बेला एकजना बरिष्ठ पत्रकारले देउवाको प्रशंसामा लेख लेखेको विषयले कांग्रेसी पत्रकार दीर्घामा खैलाबैला मच्चियो ।’बाबैले प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार बन्न मिडियामा लेख लेखेरै दरखास्त हाले’ थापागाउँस्थित प्रेस युनियनको कार्यालयमा पत्रकार महासंघका एक पूर्वसभापतिले यस्तो भने । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै कांग्रेसको कठोर आलोचना गर्दै आएका त...
इटहरी कांग्रेसमा भाँडभैलो, हेमकर्णले टिकट नपाएपछि सडक प्रदर्शनमा
इटहरी । नेपाली कांग्रेसले इटहरी उप महानगरपालिकाको मेयरमा रोहित प्रसाईलाई उम्मेदवार बनाएपछि पार्टीमा खौलाबैला मचिएको छ । मेयरका दाबेदार हेमकर्ण पौडेलका कार्यकर्ताले टिकट नपाएपछि सडकमा उत्रेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मेयरको टिकट पाउने प्रसाई कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य हुन् । उनी उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य छन् । उम्मेदवार छनौट कार्यदलले विहीबार अपरान्ह देउवा पक्षधर मानि...
मतपत्र सुरक्षामा ढाडे बिरालो ।
काठमाडौं : भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । तर, त्यतिले नपुगेर ढाडे बिरालोलाई समेत मतपत्र सुरक्षामा प्रयोग गरिएको छ । भरतपुरस्थित कभर्ड हलभित्र राखिएको मतपत्रलाई मुसाबाट जोगाउनका लागि दुईवटा ढाडे बिरालो राखिएको हो । महानगरको मतगणना भएको कभर्डहल भवनबाहिर प्रहरीले निरन्तर सुरक्षा दिइरहेका छन् । तर, भवनभित्र रहेका मतपत्रलाई जोगाउन बिरालाले सहयोग ग...
‘रातो घर’ हेरेपछि केपी ओलीले के भने ?
काठमाडौँ : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नी पत्नी तथा एमाले नेताहरुका साथ ‘रातो घर’ फिल्म हेरेका छन् । ओलीले बिहीबार बिग मुभीजको साँझ पाँच बजे फिल्म हेरेका हुन् । उनको साथमा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, प्रदिप नेपाल, योगेश भट्टराईलगायतका एमालेका नेता थिए । सबैले पूरा फिल्म हेरेका थिए । सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यसमा दुईटा कुरा देखिन्छ । नराम्...
व्यास गुफा पुगिन् पूर्व युवराज्ञी हिमानी
पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह बिहीबार दमौली आएकी छन् । नेपाल ठकुरी समाज तनहुँको निमन्त्रणामा पूर्व युवराज्ञी शाह दमौली आएकी हुन् । महर्षि वेदव्यासको जन्मस्थल दमौलीमा रहेको पवित्र धार्मिक स्थल व्यास गुफाको अवलोकनका लागि पूर्व युवराज्ञी शाह दमौली आएकी हुन् । पूर्व युवराज्ञी शाहले व्यास गुफामा पूजा अर्चना समेत गरेकी थिइन् । साथै पूर्वराज्ञी शाह व्यास गुफा परिसरमा सञ्चालन भइरहेको १८ महिने...